Akụkọ - Ntọọchị afọ 2018: njikwa ike zuru ezu na njikwa ike n'okpuru ịntanetị ike
Culturelọ ọrụ Ndị Ọrụ
18650 Batrị Lithium
Batrị Lithium Polymer
Batrị Nchekwa Ike
Batrị Pụrụ Iche
Batrị okpomọkụ dị ala
Batrị Lithium Titanate
Batrị Lithium ion
Mkpụrụ ndụ 3.7V Li-Ion
14,8V Li-Ion mkpọ
Ngwunye 36V Li-Ion
Mkpọ 72V Li-Ion
Mkpụrụ ndụ 3.2V LiFePO4
Ngwunye 36V LiFePO4
Ihe omuma batrị
Videoslọ ọrụ vidiyo
Ngwa & Ngwọta
Afọ n’afọ 2018: njikwa ike dị iche iche na - arụkọta ihe zuru oke n'okpuru ntanetị ume
Mgbasa Ozi Nchekwa Polaris Energy: Enwere ike ikwu na 2016 na 2017 bụ “afọ echiche” nke ịntanetị ike. N'oge ahụ, onye ọ bụla nọ na-atụle "gịnị bụ ịntanetị ike", "gịnị kpatara ịntanetị ịntanetị ike", na "kedu ihe ịntanetị ike nwere ike itolite?" Lee ”. Agbanyeghị, 2018 abanyela “afọ ọdịda” nke ịntanetị ike, na onye ọ bụla na-atụle n’ụzọ miri emi etu esi eme ya. Ndị ọrụ nchịkwa ike nke mba na Ministry of Science na Teknụzụ nwere ọtụtụ ọrụ nkwado na nnukwu ego nke itinye ego na isi obodo, dịka ụlọ ọrụ ngosipụta mbụ nke “+ntanetị +” smart Energy (Internet Energy) kwupụtara nke National Energy Administration kwupụtara na 2018.
Mgbasa Ozi Nchekwa Polaris Energy: Enwere ike ikwu na 2016 na 2017 bụ “afọ echiche” nke ịntanetị ike. N'oge ahụ, onye ọ bụla nọ na-atụle "gịnị bụ ịntanetị ike", "gịnị kpatara ịntanetị ịntanetị ike", na "kedu ihe ịntanetị ike nwere ike itolite?" Lee ”. Agbanyeghị, 2018 abanyela “afọ ọdịda” nke ịntanetị ike, na onye ọ bụla na-atụle n’ụzọ miri emi etu esi eme ya. Onye isi ochichi ike nke mba na ulo oru Science na teknụzụ nwere ọtụtụ ọrụ nkwado na nnukwu ego itinye ego. Dịka ọmụmaatụ, ọrụ izizi nke “Internet +” smart Energy (Internet ike) gosipụtara ọrụ nke National Energy Administration kwupụtara na 2018.
N’oge na-adịbeghị anya, e mere Mgbakọ Mba Ntanetị Internet Global 2018 na Beijing. Ihe karịrị ndị isi ụlọ ọrụ 800 sitere na mba na mpaghara 30 gburugburu ụwa gbakọtara iji lekwasị anya n'isiokwu nke "Global Energy Internet-From China Initiative to World Action". Gbanwee echiche, kọọ nsonaazụ, ma tụlee atụmatụ mmepe ịntanetị zuru ụwa ọnụ.
Enwere ike ikwu na mmadụ niile na-atụsi anya ike na njikọ nke njikọta nke ike, na ịntanetị ike nwere ike iweta mgbanwe ọhụụ na ndụ mmadụ. Na “Emere na China 2025 Summit Forum” na njedebe nke afọ 2017, Maazị Zhang Bin, onye osote onye isi nke Hanergy Group kwuputara nghọta ya banyere ịntanetị ike ụbọchị na-aga n'ihu na “Mkparịta ụka Nnọkọ Mgbakọ na Mgbakọ: Mkparịta ụka China na ụwa ”.
Mmepe nke ịntanetị ahụ dị ike emeela ka ọtụtụ ajụjụ ọhụrụ, echiche ọhụụ na teknụzụ ndị bụ isi. Site na nyocha dị omimi, onye ọ bụla tụpụtara ịntanetị ike mpaghara. Etu esi kọwaa internet ike mpaghara: Ọ bụrụ na echere na ịntanetị ike dị ka nke arụpụtara na ntanetị nke ike informationntanetị ozi ike njikọ "Wide Mpaghara Network" nwere ike ikwekọ na ike mpaghara dị ka "netwọk mpaghara mpaghara", akpọrọ "netwọkụ ike mpaghara", nke na-agbanwe ozi na mmezi ike na “Wide Mpaghara Network” na mpụga, na-enye njikwa ike na ọrụ.
Netwọ Ike Obodo
Grid mpaghara ume bụ ntọala nke nyocha ọtụtụ sistemu ume ike na ngosipụta nke njirimara nke sistemu ume. Site na echiche nke arụmọrụ, usoro ọtụtụ ike nwere ike ijikọ ike dị iche iche ma mezie nkesa dịka ihe ọnụahịa yana mmetụta gburugburu ebe obibi; site n'echiche nke ọrụ ike, a na-atụle ọnụ ọgụgụ nke onye ọrụ ahụ site na ndekọ ọnụ ọgụgụ na iji ezi uche zụlite Iji nweta ebumnuche nke ịkpụcha ntutu na ndochi ndagwurugwu, yana iji ezi uche mee ihe; site n'echiche nke netwọkụ ike, site na njikọ ọnụ nke netwọkụ eletriki, netwọọdụ gas, njikọ ọkụ, na netwọk ndị ọzọ, na-akwalite mmepe nke teknụzụ ike dị ukwuu. Mpaghara nwere ike buru oke ibu dịka obodo, obodo, obodo, ka obere dị ka ogige ọrụ, nnukwu ụlọ ọrụ, ụlọ, nke na-ekpuchi usoro ike ike dị ka inye ọkụ, ọkọnọ gas, kpo oku, ọkọnọ hydrogen, na njem njem eletriki dị ka yana nkwukọrịta ozi na ntọala ozi. Akụkụ dị mkpa nke ihe owuwu bụ na ọ kwesịrị inwe njikọ nke ọgbọ ike, nnyefe, ntụgharị, nchekwa na oriri. Na mpaghara mpaghara a nke njikọta ike dị ukwuu, ndị na - ebu ozi gụnyere “ọwa eletrik”, “gas gas”, yana “ozi”. Flow "," ihe ihe ", wdg N'ihi ya pere mpe, mpaghara ike netwọkụ nwere ike iduru ma wuo gọọmentị, ụlọ ọrụ ike na nnukwu ụlọ ọrụ aka, ma nwee ezigbo uru bara uru. Ntanetị ike mpaghara bụ akụkụ nke ịntanetị ike, nke metụtara ọtụtụ njikọ ike ma nwee ụdị na njiri mara dị iche iche. Ọ gụnyere njikọ njikọ ike dị mfe ma na-ejikọ ike na njikọta ike; O nwekwara ume nke siri ike ịchekwa na nnukwu ikike, O nwekwara ume na-adị mfe iji chekwaa ma nyefee ya; enwere ma nnweta a haziri ahazi na njedebe nke ike ume yana njikarịcha njikwa na njedebe ike ike.
Isi ihe dị na ịntanetị ike mpaghara
Tụnyere ihe ịntanetị ike mpaghara, internet ike mpaghara na-eji ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche na ndị bi n'otu mpaghara dị ka ndị ọrụ. Site na ichikota mmeputa ike, oriri, nnyefe, nchekwa na ihe omuma ndi ozo, site na nyocha nke data, nhazi ike na njikarịcha usoro a na - arụ ọrụ na - emezu ihe ndị ọrụ chọrọ. Banyere nke a, Internetntanetị ike mpaghara na-eje ozi dị ka njikọ dị n'etiti Internetntanetị ike mpaghara dị iche iche. Site na nnyefe ike dị ukwuu, nnyefe gas na netwọkụ azụ ọkpụkpụ ndị ọzọ, enwere ike ịnweta nnyefe ike ogologo oge n'etiti mpaghara, na-ejide nchekwa na nkwụsi ike nke ịntanetị ike na mpaghara ọ bụla n'ime mpaghara mkpuchi. Na-arụ ọrụ iji nye mpụta ihe dị na mpụta mgbe ịntanetị na mpaghara juru eju na oghere dị. Iji mee ka o kwekọọ n’onodu ike na usoro a chọrọ n’obodo dị iche iche, na ndabere nke ịnata ọmarịcha ahụmịhe nke usoro mmepe Internet, mpaghara ike mpaghara etolitela ụfọdụ ihe dị iche na Internetntanetị ike mpaghara.
Otu bu mmekorita otutu ihe
Iji mezuo ihe ndi mmadu choro ibu siri ike na mpaghara a, a na-ebunye ọnụ ọgụgụ akụrụngwa ike kesara n'etiti ikike Internetntanetị mpaghara, kpuchie CCHP ekesa, ọkụ na ike CHP, ike fotovoltaic, mkpokọta ikpo ọkụ anyanwụ, hydrogen. stationslọ ọrụ mmepụta, ala dị iche iche dịka nfuli mmiri ọkụ na-eweta usoro ọkọnọ nke ụdị ike dị iche iche dịka nchịkọta ọkụ eletrik, ikpo ọkụ, ikuku na ikuku, nke nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa nke ike. N'otu oge ahụ, ịntanetị ike mpaghara na-enye ọnụọgụ ntụgharị maka ihe egwu na egwu maka ụdị ike ike ekesara, mana nke a na-ebukwa ụzọ dị elu maka njikarịcha na ịchịkwa ịntanetị ike. Maka nke a, nhazi nhazi nke ikuku gas, teknụzụ P2G, teknụzụ V2G, na teknụzụ ụzụ ikuku, nke na-akwalite njikọta nke ike dị ukwuu, ga-arụ ọrụ ka mkpa n'ọdịnihu.
Nke abuo bu uzo abuo
Internet ike mpaghara ga-agbaji dị ugbu a-net-dutch ike eruba nlereanya na-etolite a free, bidirectional na controllable multi-ọgwụgwụ ike eruba nlereanya. Ndị na-ebugharị ndị na-ahụ maka ike ga-eme ka njikọta nke ike na mpaghara ọ bụla dị na mpaghara ahụ. Echichi nke ọdụ ntụgharị ike ma ọ bụ ebe a na-enweta ike ga-emebi ihe nrụpụta nke ụlọ ọrụ dị n'etiti ụlọ ọrụ kpo oku mbụ, ụlọ ọrụ ike na ụlọ ọrụ gas, na ndị bi na nwere ngwa ike kesara elekere ga-esonye na ntinye ike nke Internetntanetị na ike ndị ọzọ. na-eweta. N'ọdịnihu, na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ eletriki eletriki, netwọ ụgbọ njem ya na ụgbọ ala elektrik amamịghe dịka isi ahụ ga-ejikọtakwa na Internetntanetị ụdị ike dị ugbu a.
Atọ bu ihe omimi zuru oke
Dị iche na usoro iji ọdịnala ọdịnala, ịntanetị ike mpaghara na-eji ike dị iche iche eme ihe na mpaghara, na-ewuli usoro ike zuru oke na mpaghara ahụ, na-enweta ike zuru ezu n'ime mpaghara, ma ghọta nke ọma ojiji dị iche iche. ụlọ ọrụ ike. N'otu oge ahụ, dịka isi ihe ntanetị nke azụ azụ nke ike ntanetị, ntanetị ike mpaghara na netwọkụ azụ ike na-ejikwa ụdị ụzọ ike ike na-agafe, site n'enyemaka nke nnukwu netwọkụ azụ ike na ntanetị mpaghara ike mpaghara. ngbanwe uzo abuo nke ike na ozi.
Dabere na njirimara ndị dị n'elu, isi ihe dị na ntanetị mpaghara mpaghara bụ iji “Internet +” na-eche iji tọgharịa mkpa netwọkụ ike, iji nweta ogo dị elu nke njikọta nke ike na ozi, na iji kwalite owuwu ozi netwọkụ ume. akụrụngwa. Site na ntinye nke teknụzụ dị ka nyiwe azụmaahịa n'ịntanetị na nhazi data buru ibu, Ntanetị Energy ga-enweta ozi zuru oke dịka mmepụta ume, nnyefe, oriri, ntughari, na nchekwa, na-eduzi mmepụta ike na usoro ihe omume site na teknụzụ ndị na-egwupụta akụ dị ka. dika ikike choro ibu ma meghachi omume choro.
Etu ị ga-esi ghọta ihe dị na ntanetị ike mpaghara, Prọfesọ Sun Hongbin nke Mahadum Tsinghua kwupụtara n'usoro: njikwa ike dị iche iche jikwaa ịntanetị ike mpaghara. Mgbe onye editọ ahụ gara Prọfesọ Sun na Mahadum Tsinghua na 2015, o kwuru banyere nyocha ahụ. Na National Energy Internet Conference na December 2017, Prọfesọ Sun keere òkè ma kwurịta nsonaazụ nyocha.
Nsogbu nchịkwa kachasị mma na ịchụso uru dị na ya
Etu ị ga - esi mee ka uru dị n’okpuru n ’usoro ị nweta ike dị mma site na“ ọtụtụ mmeju ike na nhazi njikọta isi iyi ”bụ okwu lebara anya nke ndị ọkachamara na - eche banyere ya na ntinye ọrụ ngosipụta ịntanetị ike. Nke a adịghị mfe iji nweta. Site na echiche teknụzụ, enwere ike ịme nsogbu a na-elekwasị anya na njikwa kachasị nke netwọkụ na-agbapụta ike dị ike. Nsogbu a na - achịkwa nke kachasị mma bụ ịchụso uru, uru = ego na - akpata ego, na nrụgide bụ njikwa ike dị mma. Ego a na-enweta ebe a na-ere ire nke ike na ọrụ, ọnụ ahịa ya gụnyere ịzụta ume na ọrụ. A na-ekesa ụzọ kachasị mma na oyi, mmiri ọkụ, mmanụ ọkụ, ọkụ eletrik, mmiri, njem, isi mmalite, netwọk, ụgwọ, nchekwa na njikọ ndị ọzọ. Ihe mgbochi gụnyere nguzozi n'etiti ọkọnọ na ihe achọrọ, ụdị arụmọrụ yana nchekwa nke ike ọkọnọ. Emechara mata nsogbu a na - elekwasị anya na sistemụ, nke a na - akpọ Integrated Energy Management System (IEMS).
Akụkọ banyere EMS
Enwere ike ịtụle IEMS dị ka usoro nchịkwa ike nke ọgbọ nke anọ (Energy Management System, EMS). EMS bụ usoro mkpebi kọmputa na nyocha maka ntanetị, njikarịcha na njikwa etinyere ya na etiti njikwa ike nzipu. Ọ bụ ebe akwara dị n’ozi ma ziga isi ụlọ ọrụ nke ike ike ọrụ, na isi ihe amamihe dị na nnukwu okporo ụzọ. Ndị otu Prọfesọ Sun na-eme nchọpụta EMS kemgbe ihe karịrị afọ iri atọ. Nke mbu, ka anyi tulee akuko banyere EMS.
Afọ mbu nke EMS pụtara tupu 1969 ma a na-akpọ ya EMS mbụ. EMS a naanị gụnyere SCADA maka inye ike, mana ọ na - anakọta data. Enweghị ezigbo nyocha netwọkụ, ezigbo njikwa, na njikwa ọnụ. Nyochaa netwọkụ na njikarịcha kachasị dabere na ngụkọta oge a na-anọghị n'ịntanetị, ma so n'usoro usoro oge. Nlekọta ogige a dị ugbu a agaghị akwụsị n'ọkwa usoro iheomume dị mkpa, mana ọ dị mkpa ijikwa njikwa iji meziwanye asọmpi isi.
Ọgbọ nke abụọ nke EMS pụtara na mbido 1970s ka mmalite nke narị afọ nke 21 ma a na-akpọ ya omenala EMS. Onye guzobere ọgbọ a nke EMS bụ Dr. Dy-Liacco, onye tụpụtara ụdị ihe nrịba ama nke ikike sistemụ nchekwa usoro nchekwa, mepụtara nyocha mmekọrịta oge, njikarịcha, na njikwa ọnụ, yabụ na 1970s, EMS etolitela ngwa ngwa. obodo m dechara ntinye nke ike okporo ụzọ anọ na - ezipụ sistemụ ụgbọ ala na 1988, wee mechaa nri, mmịpụta, ma nweghachi ihe omimi iji zụlite EMS site na ikike ikike ọgụgụ isi onwe ha. N’oge ahụ, Mahadum Tsinghua bidoro iwebata, mgbaze na nnabata nke EMS nke Northeast Power Grid. Nihi na Northeast bu ebe ulo oru siri ike n’oge ahu, ndozi nke netiti nke Northeast Power Grid kacha bu ibu, ibu bukwara na obodo a no na Northeast. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ EMS abụrụla nke ọma. Usoro ihe omume oge a abanyeworị n'usoro usoro nyocha ma rute ọkwa ọhụrụ.
Ọgbọ nke atọ EMS bụ smart grid EMS nke isi mmalite ya na netwọkụ na-ahazi. Ọ pụtara mgbe mmepe nke ike nke mmeghari ohuru. N'oge a, enweghi mmekọrita ikuku dị n'etiti na-arụ ọrụ ike, naanị nkwonkwo nke netwọk isi mmalite. N'iburu n'uche njiri mara nke na - enweghị ike ịgbanwe agbanwe ma nwekwaa oke nnabata, enwere ike ọtụtụ akụ siri ike, site na isi-mbu gaa na nkesa. N'oge a, EMS nwere ike jikọta ma jiri akụ dị iche iche ekesara iji zụlite nhazi nke na-ejikọtara onwe ya na nhazi ụlọ ọrụ, site na isi mmalite, netwọk na Netherlands, nwere EMS kwekọrọ. Enwere EMS maka ugbo ikuku na osisi ike fotovoltaic, EMS maka ugbo ala eletriki, ụlọ na ụlọ, na EMS maka nnyefe ike, nkesa, na obere micro-grid. EMS ndị a bu izizi onwe onye, ​​wee jikọta ya site na netwọkụ nkwukọrịta iji wee mekọta mmekorita. N'oge ahụ, enwere ike ịkpọ ya ezinụlọ EMS. Enwere ọtụtụ ndị otu na ezinaụlọ EMS, ndị otu dị iche iche nwekwara njirimara dị iche iche iji jikọtara isi mmalite na njikọta netwọdu nke njikwa smart.
A na-akpọ ọgbọ nke anọ ma ọ bụ EMS nke na-esote usoro ijikwa ike jikọrọ ike, ya bụ, IEMS. Ntinyeko di n’ime ya bu n’iche na itinye isi ike di iche iche. N'ihi iberibe isi mmalite dị iche iche na ike arụmọrụ dị ala, achọrọ iji ya mee ihe zuru oke na iji cascade mee ihe; n'otu oge, n'ihi nnukwu enweghị ike mgbanwe mgbanwe, oke ikuku, mmiri na ọkụ, ọ dị mkpa iji gbasaa na njikọta nke ike dị iche iche ma chọpụta site na isi mmalite dị iche iche nke ike mgbanwe ọhụrụ iji kwado oriri. nke nnukwu mmeghari ohuru; site na njikarịcha zuru oke na usoro ihe omume kachasị uru, na ntinye aka nke nchekwa ike na njikwa dị elu, belata ụgwọ oriri ike ma melite arụmọrụ akụ na ụba nke ọrụ ike zuru oke.
Ọ dị ka ụbụrụ, n’okpuru bụ usoro ume zuru oke, oyi, okpomoku, ikuku, ọkụ eletrik, mmiri, njem, ụdị ume dị iche iche a na-akpọ, nke a na-akpọ asọba nke ike. Na Nzukọ Mba Ndị Akpọrọ Ejiri Mgbakọ Mba Nile (ICAE) e mere na UK, a ghọtara usoro ahụ ka ọ nweghị usoro ọ bụla n'ụwa. Nsonaazụ kachasị ọhụrụ wepụtara na 2017 na Mahadum Tsinghua, "Otutu Energy Complementary Comprehensive Energy Management System na Park" bụ ngwaahịa mbụ nke IEMS nke ụwa. O siri ike nye ndị otu nyocha ahụ ịgbasa grid EMS n'ime afọ 30 n'ime IEMS. Mgbe afọ 5 nke nyocha na mmepe, dabere na afọ 30 nke nyocha EMS na ahụmịhe mmepe, IEMS etolitela nke ọma.
Isi ọrụ nke IEMS
SCADA nwere ọtụtụ ike. A na-eji ya mata oge data zuru oke ma na-arụ ọrụ dị elu ma na-arụ ọrụ na nlekota ọrụ. Ọ bụ ntọala maka ịdọ aka na ntị mbụ, njikarịcha, na njikwa ọrụ na-esote, ma na-eji sọftụwia sistemụ iji kwado ọrụ nke ikpo okwu nyere. Otutu ike asọba SCADA bụ "usoro ihe mmetụta" nke IEMS. Dabere na ofntanetị nke Ike, ọ na-anakọta data ntopute ike dị ukwuu (ọnụọgụ nlele: ọkụ eletrik dị na ọkwa nke abụọ, ma kpo oku / nju oyi / ikuku dị na ọkwa nke abụọ ma ọ bụ nkeji) iji mezue ọrụ nlekota kwekọrọ. Ma nye data ahụ ntule steeti na modul arụmọrụ ngwa ọrụ dị elu, nata ntuziaka njikwa sistemu, ma ziga ha na akụrụngwa sistemụ maka igbu egbu site na akara njigharị / akara mmezi nke ime. Ngwunye ọrụ nke ike nke SCADA na-arụ ọrụ gụnyere ikesa ọkụ elele, ikuku n'ọdụ ụgbọ elu, ọrụ sistemụ, nleba anya zuru oke, ozi arụmọrụ, nyocha na nyocha, yana mkpu ọgụgụ isi.
Ọtụtụ ike steeti ala ntule. N'ihi nkesa sara mbara nke ihe nrịba ama na netwọkụ sensọ na-enye ike dị iche iche, ụdị nha dịgasị iche iche, ogo data dị ala, ihe isi ike nke mmezi ya, na ịdị elu nke mmetuta dị elu, enweghị atụ na nchịkọta data na njehie ezughi oke. . Ya mere, netwọala na-enuba ọtụtụ ike chọrọ teknụzụ atụmatụ nke steeti iji wepụta ezigbo oge, ntụkwasị obi, na-agbanwe agbanwe na steeti netwọkụ zuru oke, nke na-enye ihe ndabere maka nyocha na ime mkpebi nke IEMS. Ntughari steeti nkwuputa otutu nwere ike mezue data nha ma kpochapu ihe ojoo, ka enwere ike ichota ihe ojoo ya, weputa ya, mata ya, ma mebe onu ogugu nke ihe omuma, belata ihe mgbagwoju anya nke netiti nkwukọrịta, wee belata itinye ego na ego nke network network. Mmetụta nke mmezi mmezi na-eme ka ntụkwasị obi nke nyocha na mkpebi dị mma site na ịkwalite ntụkwasị obi nke data ndị bụ isi, ma belata ihe ọghọm nke ihe ọghọm ọrụ netwọkụ ike.
Nchịkwa na njikwa nchekwa nchekwa ike. Ihe dị mkpa maka nchekwa bụ ihe ngosipụta nke onwe, nchekwa nke sistemụ ume ahụ metụtara nchekwa ndụ na akụ. N'otu aka, ọ dị mkpa iji gosipụta echiche “N-1 ″ nchekwa nkatọ. Echiche a bụ ị attentiona ntị na njikọ adịghị ike ma mee atụmatụ. Enyere otu ihe atụ na ogbako nke akwụkwọ akụkọ anyị rụzuru n'ụtụtụ a. Ẹma ẹdọhọ ke akwa ikan̄ eke ndondo emi ke Taiwan ama ọduọ ke ntak mben ikan̄. Mgbe ahụ valvụ ahụ bụ njikọ na-adịghị ike na sistemụ ikuku ọkụ. Ya mere, anyị kwesịrị ị attentiona ntị mgbe niile na njikọ ndị na-adịghị ike, a ga-enwerịrị atụmatụ maka nsogbu, ma ọ bụghị, anyị ga-eche nnukwu ihe egwu. N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa ị attentiona ntị na nche nchebe nke ọnụ ụzọ azụmahịa nke ogige ahụ. Ikike ikike na ọnụego ọrụ nke ọnụ ụzọ ogige ahụ bụ isi okwu. N’aka aka, ike buru ibu, onu ogugu ego nke onye na-agbanwe ihe di elu, ma n’aka nke ozo, ibu karie, ikike ikike nke ulo oru grid di elu. Dịka ọmụmaatụ, ngụkọta ego nke itinye ego na arụ ọrụ nke ike 50 MW na 100 MW ike dị nnọọ iche. Ọ bụrụ na emebere ya ka ọ bụrụ ikike MW 50, a ga-akpọ onye na - agbanwe ọkụ ọkụ ma ọ bụrụ na agafee oke ikike. Otu esi ejikwa ọnụ ụzọ ámá na-erugharị n'ime megawatts 50 bụ nsogbu nke njikwa nchekwa. N'ime usoro ike dị n'ọdịdị, ike dị iche iche na-agakọ ma na-emetụta ibe ha. Otu akụkụ nke mmejọ na ọgba aghara ahụ ga-emetụta akụkụ ndị ọzọ nke sistemụ ịba ụba ike, nke nwere ike ibute mmeghachi ụdọ, ya mere, achọrọ nyocha. You nwere ike iji mgbanwe nke ọkụ ọkụ, gas na sistemụ ndị ọzọ na-eweta iji mepụta ụzọ ọhụrụ maka nchekwa nchekwa nke sistemụ eletrik. Can nwere ike iji ụzọ ọhụụ ndị a mee njikwa nchekwa nchekwa.
Nhazi usoro nkwupute ike dị ukwuu. E nwere ọtụtụ echiche dị mkpa ebe a: atụmatụ mbido, nzụlite ụbọchị, nhazi ụbọchị, yana njikwa oge. Enwere ike ịmalite ma ọ bụ kwụsị ogige ma ọ bụ sọsọ obodo, mpaghara gas, na mmanụ ụgbọ mmiri. Enwere ike ịkwụsị ụfọdụ akụrụngwa iji belata ụgwọ ọrụ. Enwere ike ịmalite ma kwụsị dịka atụmatụ kachasị dị na mbido ma ọ bụ kwusi kpebiri ụbọchị ole na ole gara aga. Wee mezie etu esi apụta na nmalite na nkwụsị, nke a bụ usoro nhazi ụbọchị. Ntinye nke ụbọchị bụ n'ihi ngbanwe nke ike ikuku na mgbanwe mgbanwe, yabụ ọ dị mkpa ịmalitegharị n'etiti ụbọchị imeghari ikike mmepụta ọhụụ nke kwesịrị ekwesị ma nwekwaa ezigbo nguzozi n'etiti mbupute na ibu. N'ikpeazụ, mgbe a ruru ọkwa nke abụọ, a chọrọ njikwa. Maka nchekwa netwọkụ, usoro voltaji, yana mgbanwe ụda olu, achọrọ njikwa oge. Oge nhazi maka usoro iheomume dị ogologo, n'ozuzu ya na nkeji iri na ise, njikwa ya na sekọnd, na oge nhazi dị mkpụmkpụ. N'ime sistemu ume ike, enwere ụzọ a na-ejikwa ike achịkwa karịa otu usoro ike. Site n'echiche nke nchekwa grid ibu, enwere ike ịme usoro nhazi na ịchịkwa nju oyi, kpo oku, gas na ọkụ eletrik.
Ọnụahịa ike nke ọnụ ala eletriki ike. Ogige ma ọ bụ obodo mara mma aghaghị ịtụle iwu ụdị azụmaahịa dị n'ime. Ihe nlereanya nke azụmaahịa abụghị nke mpụga, ọ bụghị n'elu, kama ọ bụ na ndị ọrụ n'ogige ahụ. Kedu ihe ụdị azụmahịa a kwesịrị ịdị? Mostdị sayensị kachasị mara bụ ụdị ọnụahịa ọnụ. Ekwesịrị iburu ụzọ gosipụta ọnụahịa ike n ’ebe dị iche iche. Ike a na-eri riri gụnyere akụkụ anọ: otu bụ ụgwọ nke ike ikuku; nke abụọ bụ ego mfu n’efu; nke ato bu ego nke mkpọchi network; anọ ka ọ bụ ọnụ ahịa nke njikọ ike. Mgbe ahụ ọ dị mkpa iji sayensị gbakọta ọnụ ahịa ike nke oghere ọ bụla, gụnyere ọnụahịa oyi, okpomọkụ, ikuku na ọkụ eletrik, na ọnụahịa nke oge dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche. Naanị site na ngụkọta oge ziri ezi ka enwere ike belata ọnụego ike nke ogige ahụ, n'ihi na can nwere ike iji akara ngosi ọnụ iji duzie ndị ọrụ iji ike. N'ụzọ dị otu a, enwere ike belata ụgwọ ọrụ nke ogige ahụ niile site na ọnụ ahịa ike mgbanwe.
Edebere ọnụ ọnụ ọnụ ike ya dabere ọnụego nrụpụta nke ndị na-ebubata ya. Mgbe egbochiri ahịrị ahụ, ọnụahịa nke ọnụ ụzọ ọ bụla na-ebute ọnụahịa dị iche iche dabere na ọnọdụ. Ọnụahịa ezigbo oge nwere ike ịkwalite mgbanwe nke akụkụ onye ọrụ. Ọnụ ọnụ ọnụ na-egosi ọnụ ahịa sayensị, nke na-enyere aka ịhazi usoro ahịa dị n'ime.
Otutu ike agbara oruru ike osisi. Osisi ike mebere bụ azụmaahịa maka azụmaahịa dị elu. Enwere ike ịtụgharị ogige ma ọ bụ obodo niile ka ọ bụrụ nnukwu osisi ọkụ. N’agbanyeghi na obughi osisi ihe eji aru aru, enwere otutu ikere dika ndi ekpuchita ume na ikpo oku na ikpo oku na okpomoku. N'ime nnukwu ọkpụkpọ ahịa na-agbanwe agbanwe. N'ihi obere ikike na nnukwu ọnụọgụ akụrụngwa kesara, o siri ike ijikwa ahịa n'otu n'otu. Site na nchịkọta nke ike ọkụkụ ike, enwere ike ịhazi ma tinye ya n'ọrụ site na ngwanrọ ngwanrọ iji nye ọrịrị kachasị elu, mgbanwe ụda, usoro voltaji na ọrụ ndị ọzọ maka ahịa. Nkuzi maka oke oke na itinye n'ọrụ akụnụba niile. Businessdị azụmaahịa dị otú a nwere ike iweta uru akụ na ụba dị elu, nke mechara bụrụ ihe na United States.
Dabere na nhazi kachasị, kompeni ike ike nwere ike chịkọbata ike ọkọnọ, njikwa ihe na ngwaọrụ nchekwa nchekwa n'obere ogige ahụ, ka ogige ahụ nwee ike sonye na arụmọrụ ma ziga nke mgbago ike dị elu dịka dum. Virtuallọ ọrụ ike ọkụ na-ahụ maka ihe dị iche n'etiti ngọngọ ike dị elu na akụrụngwa kesara, na-erite uru zuru ezu na uru nke kesara akụrụngwa na-eweta na mgbanye ike na ndị ọrụ, na-achọpụta mmekọrịta na enyi na grid ike.
Ihe ogugu a gosiputara ihe owuwu n’ime nke ulo oru ike di elu
N’oge na-adịghị anya, ọ bụ ya bụ ebe nchekwa netwọrụ na-ebute. Akụkụ isi mmalite a gụnyere akụrụngwa ike nke igwe elekere, ngalaba CHP, mmanụ ọkụ na akụrụngwa ndị ọzọ, yana mgbanye ọkụ eletrik na mpụga ma nweta ume ọhụrụ; a na-ekewa grid mmiri oyi na ikpo ọkụ na sistemụ ndị ọzọ; Akụkụ Dutch bụ ọkụ eletrik, okpomoku na ngwongwo oyi n'ime ogige Ahụ N'ihe nchekwa nchekwa, sistemụ ume dị iche iche nwere ngwa nchekwa nchekwa nke onwe ha. N'ime ụzọ ogologo, ọkụ eletrik, ikuku, ọkụ na oyi na-atụkọta onwe ha. A na-anọchite anya sistemu ume dị iche iche na agba dị iche iche, yana akụrụngwa ntụgharị nke ike (nfuli ọkụ ọkụ, CHP, mmanụ ọkụ, listi lithium bromide) di na nwunye dị iche iche. A na-agakọ ma rụọ ọrụ n'ụdị ike dị iche iche na ogige ahụ n'ụdị ike osisi. Na ntinye aka nke ike eletrik, okpomoku na udu di ala, a gha enweta ihe ndi choro ike, a na aru oru ike, a na –ebelata onu ahia ume. Maka ume ọhụrụ a na-agbanwe agbanwe, ike sistemụ igwe nwere ike mgbanwe, nke na-akwalite nnabata nke ume ọhụrụ ma na-emeziwanye akụnụba nke sistemụ ahụ.
IEMS ngwa ikpe
Ihe Ngosiputa Ntughari “Internet +” Smart Energy (Energy Internet) na Chengdu Hi-tech West District. Mpaghara Chengdu West High-tech mpaghara bụ ogige ọrụ mmepụta ihe dị ka square kilomita 40. Usoro IEMS na-enyocha ọkọnọ na ike nke ike zuru oke ebe a iji nweta njikarịcha ike jikọrọ ọnụ. Na-elekwasị anya na agụụ maka ike dịka ọkụ eletrik, ikuku, jụrụ oyi, na ikpo ọkụ, imepụta ogige ihe ngosi internet nke ike dabere na mpaghara ume dị ọcha (ikuku gas na ọkụ ọkụ jikọtara ọnụ, fotovoltaics, ike ikuku, wdg) ga-abụ rụrụ iji nweta gas na ume ikuku nke mpaghara mpaghara ọdịda anyanwụ, ikuku na ike anyanwụ, uzuoku, mmiri oyi, mmiri ọkụ, ọkụ eletrik na njikwa ike ndị ọzọ.
Usoro njikwa ike zuru oke nke ụlọ ọrụ Guangzhou Conghua R&D na ihe ngosi. Akụkụ dị mkpa nke ogige a bụ ihe dịka 12 square kilomita ma ọ bụkwa ogige ọrụ mmepụta. A na-eji ike ume ọrụ nke ogige mmepụta ihe nwere nnukwu ikike, asọmpi ike, na nnukwu ọgbụgba dị elu. O nwere ezigbo onodu ọnọdụ maka imekorita ike na otutu izipu otutu ume. Ọ dabara adaba maka ngosipụta nke “+ntanetị” ”smart ike Integrated service service model. Mpaghara. Rụlite usoro IEMS n'ime ogige ahụ, tụpụta mpaghara ọkụ eletrik na onye na-achọ ihe ga-eweta nzaghachi ọnọdụ, mejuputa teknụzụ njikwa ụyọkọ njikwa teknụzụ, n'ikpeazụ usoro ahụ na-achọpụta ngwa ọrụ maka ọrụ.
Ihe oru ngo R&D nke usoro ike oru ikike ike na Lisha Island, Dongguan, Guangdong. Agwaetiti Dongguan Lisha bu kwa ogige ulo oru ihe dika 12km. E kewara usoro ike ọkụ nke Lisha Island ọkwa anọ ndị a: nke mbụ, ikike ume nke ogige n'okpuru njikọ nke thermoelectricity; nke abuo, enwere ihe isi ike mgbe atuleghi ya. nke ato, njikwa ike mpaghara na amụma ahụ nwere ahaziri nke ọma; nke anọ, mmekorita (azụmahịa) n'etiti ọdịnihu na nnukwu usoro iji mepụta onye na-eweta ike jikọtara ọnụ. E kewara usoro nyocha na mmepe nke ike njikwa ike anọ: nke mbụ, mkpokọta bụ ihe dị ukwuu ma na-achịkwa akụkụ; nke abuo, ihe zuru ezu bu ihe a na-ejikwa ike na ndi nkecha; nke ato, njikarịcha na akụkụ nke mmekọrịta ahụ; nke anọ, njikọta na nkwonkwo niile.
Jilin Province multi-power flow sara mbara njikwa ike njikwa njikarịcha njikwa nyocha. Nkeka nke igwe oku di na Jilin Province buru ibu, enweghi ikike ngbanye nchekwa di ka pump na gas. Jilin dị n’ebe a na-ajụ oyi. Oge kpo oku n'oge oyi dị ka ọkara afọ. Ihe kariri 90% nke nkeji oku di oku. Mgbe a na-eme ka ọkụ dị ọkụ, obere nrụpụta kachasịnụ karịa karịa nke kachasi ike n'ógbè ahụ, nnukwu mgbali ike ikuku, na nsogbu nke ịhapụ ikuku dị oke njọ. Isi ihe kpatara ya bụ na njikọ ọkụ ọkụ nke ọkụ eletrik nke ụlọ ọrụ kpo oku na “idozi ọkụ eletrik na ọnọdụ ọkụ” na-ebelata ikelata ntutu ya kachasị elu ma mee ka ike ikuku dị. Otu esi eji ahia esi eme ka njikwa na ahia nke uzo bara ụba bu isi nsogbu kacha sie ike. Maka nke a, a haziri sistemu nke IEMS ka ha nyochaa usoro ahia ahia ahia nke igwe ume-ume n’iru ume, imuta onu ahia nke otutu ndi n’egwuregwu, ma muo ihe ozo, nzaghachi ozo nke na-enweta ike na mpaghara ngosi a haziri. , na teknuzu ike njikwa ike njikwa njikwa njikwa njikwa ike iji dozie nsogbu nke nnukwu ikuku ike mgbe ị na-enweta kpo oku dị ọcha.
Na ntanetị nke ike ịntanetị site na “echiche” ruo “ọdịda”, a ka nwere ọtụtụ echiche ọhụụ, teknụzụ ọhụụ, ngwa ọhụrụ, nke aga-edozi ma kesaa gị n'ọdịnihu, na-enwe olileanya inyere ọrụ mmadụ na ọmụmụ ya aka.
Oge nzipu ozi: Jul-08-2020
SOSLLI nwere sistemụ batrị dị elu, ụlọ ọrụ akala nká, ngwaọrụ nnwale BMS, 100v nnukwu igwe nnwale batrị Li-ion ugbu a, igwe ịgbado ọkụ akpaka, igwe ntanetị nzacha akpaka na etiti ule.
Batrị Lithium batrị, Ibe batrị Lithium, Ngwunye batrị, Sili batrị Lithium Ion, Batrị Lithium-Ion 3.6v, Batrị 20ah Lithium Ion,
Banye na aka
3 / F, Bldg. A, Mpaghara Ahịa Tongfeng, No.29 Longwan Market Rd., Kengzi Street, Pingshan New District, Shenzhen, China 518122